म एक श्रीमती चाहन्छु – Janamanch.com
म एक श्रीमती चाहन्छु
म मानिसको त्यो वर्गमा पर्छु, जसलाई श्रीमती भनिन्छ। म एक श्रीमती हुँ। र, संयोगले मात्र होइन, साथसाथै एक आमा पनि हुँ। केहीअघि मेरो जीवनमा एक पुरुष साथीको आगमन भयो, जसको भर्खरै पारपाचुके भएको थियो। उसको एक बच्चा थियो, पहिलेको श्रीमतीपट्टिको। ऊ अर्की श्रीमती खोजिरहेको थियो। एक साँझ म कपडामा स्त्री गर्दै उसको बारे सोच्दै थिएँ, अचानक मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो, मेरो पनि एक श्रीमती होस्।
मेरो श्रीमती किन होस् ?
आर्थिक उपार्जनका लागि म फेरि स्कुलमा काम गर्न चाहन्छु, आफैंलाई सहायता गर्न र प¥यो भने आफूमाथि आ िश्रतलाई पनि सहायता गर्न। म एक श्रीमती चाहन्छु जसले मेरा काम गरिदियोस् र मलाई स्कुल पठाओस्। जब म स्कुल जान्छु, त्यतिबेला श्रीमतीले मेरा छोराछोरीको हेरचाह गरिदेओस्।
म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरा छोराछोरीका डाक्टर र दन्त चिकित्सकको समय ख्याल गरोस्। र, मेरो पनि ख्याल राखोस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरा केटाकेटीलाई ठीकसँग खुवाओस् र सरसफाइ गरिदेओस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरा केटाकेटीको लुगा धोइदेओस् र सिलाइदेओस्। म एक श्रीमती चाहन्छु जसले मेरा केटाकेटीको पालनपोषण राम्रोसँग गरोस्, उनीहरूको स्कुलका सबै कुरा मिलाइदेओस्, तिनीहरूलाई सहपाठीसँग घुलमिल हुन सजिलो बनाइदेओस्, उनीहरूलाई बगैंचा र चिडियाखाना घुमाओस्। म एक श्रीमती चाहन्छु जसले मेरा केटाकेटी बिरामी हुँदा हेरचाह गरोस्। एक श्रीमती जसले केटाकेटीलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्ने बेला उनीहरूको वरिपरि बसिदेओस्। किनभने, म आफूले पढाउनुपर्ने कक्षा छुटाउन सक्दिनँ।
मेरी श्रीमतीले मलाई कामबाट छुटकारा दिलाउनुपर्छ किनकि मैले मेरो नोकरी गुमाउनु हुँदैन। यसले मेरी श्रीमतीको आम्दानीमा केही कमी ल्याउने छ। तर, मलाई लाग्छ, यत्ति त म सहन सकिहाल्छु नि। जब ऊ काम गर्न थाल्छे, त्यति बेला केटाकेटीको खर्च पनि उसैले बेहोर्न सकिहाल्छे। यति त भनिरहन पनि पर्दैन।
म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरा शारीरिक आवश्यकताको ख्याल राखोस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरो घर सफा राखोस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले केटाकेटीले गरेको फोहोर सफा गरोस्, मैले गरेका फोहोर सफा गरोस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरा लुगा सफा गरिदेओस्, स्त्री गरिदेओस् र सिलाइदेओस्। पुराना भएपछि त्यसको ठाउँमा नयाँ ल्याइदेओस्। मेरा व्यक्तिगत सामानहरू ठीकठीक ठाउँमा यसरी राखिदेओस् कि चाहिएको एक मिनेटमै भेट्टाउन सकूँ। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले खाना बनाओस्। एक श्रीमती, जसले मीठो पकाउन सकोस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले खानेकुरा छनोट गरोस्, दैनिक उपभोग्य सामग्री किनोस्, खाना तयार पारोस्, विनम्रतासाथ सबैलाई खुवाओस्। जब म पढ्न थाल्छु, उसले भान्छा सरसफाइ गरोस्।
म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले म बिरामी हुँदा हेरचाह गरोस्। मेरो पीडामा र स्कुल छुटेकोमा सान्त्वना दिलाओस्। म एक श्रीमती चाहन्छु जो मेरो बिदाको बेलामा परिवारसँगै घुम्न जाओस् र त्यहाँ पनि मेरो र केटाकेटीको ख्याल राखिरहोस्, जहाँ म आराम गर्न र ताजकी महसुस गर्न चाहन्छु। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले आफ्ना कामबारे मसँग अनावश्यक गन्गन नगरोस्। तर, म एक श्रीमती चाहन्छु जसले मैले पढाउने विषयमा आएको अप्ठ्यारोबारे मैले भन्न चाहेको कुरा सुनिदेओस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मैले लेखेका कुराहरू टाइप गरिदेओस्।
म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरो सार्वजनिक जीवनका ससाना कुरा ख्याल गरिदेओस्। जब मेरा साथीहरूले हामी दम्पतीलाई बोलाउँछन्, त्यहाँ उसले बच्चाको ख्याल राखोस्। जब म स्कुलमा मलाई मन पर्ने कोही व्यक्ति भेट्छु, उसलाई बोलाएको बेला श्रीमतीले घर सफा राखोस्, मीठामीठा परिकार बनाओस्, मलाई र मेरा साथीलाई खुवाओस्। मेरा साथीहरूलाई मन पर्ने कुरा गरिरहेको बेला ऊ बीचमा नआइदेओस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले बच्चाहरूलाई मेरा पाहुना आउनुअघि नै खुवाएर सुताओस्, उनीहरूले हामीलाई झर्को नलगाउन्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरा पाहुनाको चाहनामा ध्यान देओस् र उनीहरूलाई सहज बनाइदेओस्। उनीहरूका लागि एस्ट्रे राखिदेओस्। ठीक समयमा सलाद राखिदेओस्। खालि भएपछि वाइनको गिलास भरिदेओस्। कफी पिउन चाहनेलाई कफी देओस्। र, म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले कुनैकुनै रात मैले घरबाहिर बिताउनुपर्छ भन्ने बुझिदेओस्।
म एक श्रीमती चाहन्छु, जो मेरो यौन आवश्यकताप्रति संवेदनशील भइदेओस्। एक श्रीमती, जसले लगाव र उत्साहका साथ मलाई प्रेम गरोस्। जसले मलाई सन्तुष्ट बनाइराखोस्। र, पक्कै, म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरो मुड नभएको बेला शरीर सुखका लागि कर नगरोस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले गर्भनिरोधको सबै जिम्मेवारी आफैं लेओस्, किनभने म अरू बच्चा चाहन्नँ। म एक श्रीमती चाहन्छु, जो यौनसम्बन्धमा विश्वास कायम राखोस् र ऊप्रतिको ईष्र्याका कारण मेरो बौद्धिक जीवन अस्तव्यस्त नहोस्। म एक श्रीमती चाहन्छु, जसले मेरो यौन आवश्यकता एक व्यक्तिप्रति प्रतिबद्ध भइरहन सक्दैन भन्ने बुझोस्। र, म अरू मानिससँग पूर्ण सम्बन्ध बनाउन सकूँ।
यदि मैले संयोगवश अहिलेको श्रीमतीभन्दा मेरा लागि अझ उपयुक्त हुने व्यक्ति भेटेँ भने उसलाई नै आफ्नो श्रीमती बनाउन चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा म नयाँ र भिन्न जीवन चाहन्छु। मेरी श्रीमतीले बच्चाहरू आफैंसँग लैजाओस्, उनीहरूको सबै जिम्मेवारी एक्लै लेओस् र म स्वतन्त्र हुन सकूँ। जब म स्कुलबाट फर्किन्छु, मेरी श्रीमतीले सबै काम सकेर घरमा बसोस्। उसले पूर्ण रूपमा श्रीमतीको जिम्मेवारी वहन गरोस्। प्रभु, कसले यस्ती एक श्रीमती होस् भन्ने चाहँदैन ?
(चर्चित ब्रिटिस–अमेरिकन लेखिका जुडी ब्राडीको यो निबन्ध सबैभन्दा पहिले अमेरिकाको चर्चित म्यागेजिन ‘एमएस म्यागेजिन’को डिसेम्बर १९७१ मा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि पनि दर्जनौंपटक यो निबन्ध पुनः प्रकाशित भएको छ। प्रकाशित भएको झन्डै आधा शताब्दी बित्दा पनि यो निबन्धको सान्दर्भिकता कायमै छ। यो निबन्धको नेपाली अनुवाद रोहेज खतिवडाले गरेका हुन्।)